Wararka - Cadaadiska daaweynta kuleylka iyo kala soocida mootada
Cadaadiska daaweynta kuleylka iyo kala soocida mootada
Cadaadiska daaweynta kuleylka waxaa loo qeybin karaa cadaadiska kuleylka iyo culeyska unugyada. Qallooca daaweynta kuleylka ee qeybta shaqada ayaa ah natiijada ka dhalatay isku dhafka isku buuqa kuleylka iyo walbahaarka unugyada. Xaaladda culeyska daaweynta kuleylka ee qeybta shaqada iyo saameynta ay keento way kala duwan yihiin. Cadaadiska gudaha ee ay sababto kululeynta ama qaboojinta sinnaanta waxaa loo yaqaan 'thermal stress'; diiqadda gudaha ee ay keento waqtiga aan loo sinnayn ee isbeddelka unugyada waxaa loo yaqaannaa walbahaarka unugyada. Intaas waxaa sii dheer, culeyska gudaha ee ay sababtay isbadal la'aanta qaabdhismeedka gudaha ee shaqada waxaa loo yaqaannaa cadaadis dheeri ah. Xaaladda ugu dambeysa ee culeyska culeyska iyo cabirka walxaha shaqada ka dib daaweynta kuleylka waxay kuxirantahay wadarta isku buuqa kuleylka, culeyska unugyada iyo walbahaarka dheeriga ah, oo loo yaqaan walbahaarka haraaga ah.
Qallooca iyo dildilaaca ay sameysay qeybta shaqada inta lagu guda jiro daaweynta kuleylka ayaa ah natiijada ka dhalatay isku dhafka culeysyadaan gudaha ah. Isla mar ahaantaana, saameynta diiqada daaweynta kuleylka, mararka qaarkood qayb ka mid ah shaqaaluhu wuxuu ku jiraa xaalad cadaadis kacsan, qaybta kalena waxay ku jirtaa xaalad cadaadis cadaadis leh, mararka qaarkoodna qaybinta xaaladda walaaca ee qayb kasta. of workpiece waxay noqon kartaa mid aad u adag. Tan waa in lagu falanqeeyaa iyadoo loo eegayo xaaladda dhabta ah.
1. Cadaadiska kuleylka
Cadaadiska kuleylka waa culeyska gudaha ee ka dhasha balaadhinta mugga iyo foosha oo ay keento faraqa kuleylka ama heerka qaboojinta inta u dhexeysa dusha sare ee qalabka shaqada iyo bartamaha ama qaybaha khafiifka ah iyo kuwa qaro weyn inta lagu jiro daaweynta kuleylka. Guud ahaan, sida ugu dhakhsaha badan heerka kuleylka ama qaboojinta, ayaa sii weynaanaya walaaca kuleylka ee la abuuray.
2. Cudurka cadka
Cadaadiska gudaha ee ka dhasha waqtiga aan sinnayn ee isbeddelka mugga ee gaarka ah ee ay keento isbeddelka wajiga waxaa lagu magacaabaa walbahaarka unugyada, oo sidoo kale loo yaqaan 'stress transformation phase' Guud ahaan, weynaanshaha mugga gaarka ah kahor iyo kadib beddelka qaabdhismeedka unugyada iyo weynida waqtiga udhaxeeya kala-guurka, ayaa sii weynaanaya culeyska unugyada.
Waqtiga dhejinta: Jul-07-2020
Falanqaynta Geeddi socodka qulqulka qulqulka ...
Cadaadiska daaweynta kuleylka iyo kala soocida ...
Magaalada Shimenqiao, Magaalada Renqiu, Gobolka Hebei, Shiinaha